जाडोमा रुघाखोकी लागिरहन्छ ? यस्तो छ उपचार विधि – rastriyakhabar.com
जाडोमा रुघाखोकी लागिरहन्छ ? यस्तो छ उपचार विधि
जब चिसो सुरु हुन्छ, रुघाखोकीले सताउँछ । बाह्य चिसोलाई शरीरले थेग्न नसकेपछि हामीलाई रुघा लाग्छ । रुघा आफैमा जटिल समस्या होइन । मौसमी संक्रमण हो । यद्यपी रुघा लागेपछि नाखबाट निरन्तर पातलो सिंगान र्झछ । यसले गर्दा हाम्रो दैनिक कार्यसंचालनमा वाधा पुग्छ ।
रुघाको कारण ज्वरो पनि आउँछ । यसले निमोनियाको खतरा पनि बढाउँछ ।
यसले नाकमा असर पार्ने गर्छ । पटक पटक हाँच्छिउ आउने, नाकबाट सिँगान बग्ने, नाक बन्द हुने, नाक चिलाउने, टाउको दुख्ने, आँखाको मुनी कालो बस्ने जस्ता समस्या हुन्छ ।
एलर्जिक रायनाइटिस विभिन्न कारणले हुने गर्छ । जुन यस प्रकार छ
-घरमा जमेको धुलो
-घासको परागको कण
-धुलो , धुवाँ, प्रदुषण
-अण्डा, दूध, दाल लगायतको खाद्य पदार्थ
सामान्य रुघाखोकी भन्दा जटिल
सामान्यतयाः धेरैलाई हुने रुघाखोकीको समस्या भाइरसका कारण हुने गर्छ, जबकी एलर्जिक रायनाइटिस एलर्जन्सका कारण हुने गर्दछ ।
यद्यपी, एलर्जिक रायनाइटिसमा ज्वरो आउने वा जीउ दुख्ने लगायतको समस्या देखिदैन । नाकबाट निरन्तर बग्ने सिँगान पनि पहेलो नभई सेतो पानी पानी जस्तो हुन्छ । हाँच्छिउ पनि निरन्तर आउँछ । नाक , कन तथा घाँटीमा चिलाएजस्तो महसुस हुने तथा आँखाबाट पानी बग्ने गर्छ ।
नाक भित्रको छाला सुनिनएर त्यहाँ गाँठो परेमा त्यसलाई नोजल पोलिप्स भन्ने गरिन्छ । यस्तो पोलिप्स यति धेरै ठूलो हुनसक्छ कि यसले नाकको प्वाल टालेर सास फेर्नमा कठिनाई उत्पन्न हुनसक्छ ।
नाकभित्र रहेको हड्डी वरिपरि खाली ठाउँ रहेको हुन्छ जसलाई सायनस भन्ने गरिन्छ । नाकबाट धेरै सिगान बग्नाले सायनसमा नाकको फोहर जम्ने गर्दछ जसले रगर्दा रोगको किटाणु उत्पन्न हुन सक्छ ।
नाक सुनिनु, नाकबाट पानी बग्नु, नाक तथा घाटी चिलाउन जस्ता लक्षण लामेा समयसम्म रहिरहे दम वा आज्मा हुनसक्दछ ।
यस्तो समस्या भएमा कयौ मानिसहरु चिकित्सकको सल्लाह विना नै औषधीको सेवन गर्दछन् । जबकी एलर्जिक रायनाइटिस भएमा चिकित्सकको सल्लाह पछि मात्र औषधी खानु पर्छ ।